Nambarany fa araka ny fanamby efa napetrany dia ho taonan’ny asa ity taona ity ho an’ny ORTVA. Isan’izany ny fanaovana hetsika ho fampahafantarana an’i Vakinankaratra toy ny fitiliana toerana azo hisarihana mpizahatany, teo ny “Eductour”, izay ho fiarovana ny lafiny fizahantany ao Vakinankaratra amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka, izay mbola tohizana ny fampahafantarana ireo toerana fizahantany efa misy.
I Vakinankaratra manokana dia manana ny mampiavaka azy eo amin’ny lafiny fizahantany dia ny kolontsaina sy ny toe-tany ary ny asa tanana, ary i Vakinankaratra irery no manana sampanasa Tanana eo amin’ny fizahantany.
Eo ihany koa ny fizahantany ambanivohitra izay tena manomboka mahazo vahana ao Vakinankaratra. Na dia isan’ny tanjona teo aloha aza ny fihazonana ho maharitra ireo mpizahatany ao Vakinankaratra dia tsy tratra izany saingy nitombo kosa ny tahan’ny fitsidihana raha ny antotanisa eo amin’izy ireo.